PressReader - Ilanga: 2017-10-05 - USUTHU LUVUKUZA ABALANDELI EGOLI
USUTHU LUVUKUZA ABALANDELI EGOLI
Ilanga - 2017-10-05 - Ezemidlalo -
AMAZULU FC asembhidlangweni wokubuyisa abalandeli bawo abasekubhaceni nokuvundulula abasha ngemikhankaso azoqhubeka nayo ngeSonto ezindaweni ezahlukene eGauteng.
Le kilabhu eyiqale kahle isizini ye-Absa Premiership ihlele imihlangano yabalandeli bayo abazinze eGoli namaphethelo ukubanxusa ukuhambela ngobuningi imidlalo yasekuhambeni yale kilabhu kusuka ngoweMamelodi Sundowns ozokuba ngoMgqibelo womhla zingama-21 kwephezulu eLucas Moripe Stadium, e-Atteridgeville, eTshwane. Le mihlangano ihlelwa yikomidi labalandeli boSuthu elizinze eGoli.
Imihlangano ihlelelwe usuku lwangeSonto kanti kuzoqala owabalandeli base-Alexander Library ngo-09h00 ohlelwa nguManqele otholakala kwethi: 078 479 5026, kube ngowaseThokoza, eNatalspruit, ozoqala ngo-09h30, kube ngowaseJeppestown Library ngo-10h00 lapho kuthintwa khona uNdawonye kwethi: 082 695 4554. Ngo-11h30 kuhlangana abaseDenver, eJulies, lapho kuthintwa khona uZondi kwethi: 076 685 3855 bese kuvala owaseGeorge Goch ngo-12 emini.
Abalandeli bayaziswa ukuthi imali yokuya emdlalweni neDowns nguR70 ngakho bangabe beqala beyibekelela kanti ngaphambi kohambo olubheke eTshwane kuzohlanganwa eBetha Solomon Hall ngo10 ekuseni. Ngemininingwane egcwele ngalo mkhankaso waseGoli kuthintwa uMphostoli Zwane enombolweni ethi: 082 830 1250 noma uBhekinkosi Cebekhulu kwethi: 082 860 1300.